Akpa Pvc ahaziri iche, akpa akpa na-abụghị ihe mkpuchi, akpa akpa - Ihe zuru ezu
Akpa na-abụghị nke a kpara akpa
Ndi nwere kaadị
Ihe njide kaadi plastik
Igbe rụrụ arụ
Factorylọ ọrụ anyị dị na Qingdao, nso ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ elu, ụgbọ njem dị mma.
Anyị na-enye ndị ahịa ọrụ ọrụ na-eju afọ dabere na otu kachasị mma, nzaghachi ozugbo na teknụzụ dị elu.
Anyị na-enyocha ngwa ahịa mgbe niile tupu nnyefe iji hụ na anyị weta ngwaahịa ndị dị elu.
Akpụghị akwa akpa akwa PVC
Akpa pịa akpa PVC maka akwa ụra
Akpa PVC nwere bọtịnụ snap
Akpa PVC na zipa
Qingdao zuru oke, nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd dị na Qingdao, bụ nke ama ama na akpa pvc, akpa a na-eteghị akpa, akpa akwa, akpa igbe, akpa akwụkwọ, akpa mpempe akwụkwọ, akpa akwụkwọ, akpa mpempe akwụkwọ pụrụ iche, wdg.
Qingdao, Nkwakọ ngwaahịa zuru oke Co., Ltd.
Ekwentị: 0086 156 66686664
Azụmaahịa si mba ofesi Island “stabi…
Mbubata na ibubata, ibubata, mbubata na ihe ndị ọzọ egosipụtarala nke ọma, azụmaahịa mba ofesi Qingdao egosiputala mgbali siri ike nke “imeziwanye ma kawanye mma”. Dika ihe ohuru si…
Ngwaahịa anyị dị mma
Site n’ebe a anyị na-ahụ na akpa ndị a na-eteghị aka dị mma karịa ihe ndị ọzọ n’akpa aka, n’agbanyeghi ọnụ ahịa ma ọ bụ echiche mmetọ gburugburu ebe obibi, karie, naịlọn, kwaaji, Oxford, wdg.
Gịnị mere akpa ndị na-abụghị nke a kpara akpa ji ewu ewu?
A na-eji akpa akpa akpa ụbọchị ọ bụla na ndụ anyị. Otu n'ime akpa ndị a ma ama na nke a na-ejikarị bụ akpa aka. Yabụ ugbu a, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-etinyekwu uche na ihe na ụzọ nke ịme akpa na afọ a. Kedu ihe ...
Ekwesịrị ị attentiona ntị na nsogbu ndị a ...
A na-ejikarị akwa akpa n'oge a n'ihi na ọ nwere ihe dị mma na nke a na-emezigharị, nke a na-eji akwa ndị na-abụghị nke a na-emepụta dị ka isi akụrụngwa. Ya mere, ihe ndị chọrọ akpa ndị na-abụghị nke a na-akpa na-abawanye kwa afọ, na-arịwanye elu ma ...
© nwebisiinka - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Tags - Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Card ịgụ , Ihe njide kaadi plastik, corrugated Box ,